Madaxweynaha Somaliland iyo Weftigiisa sidee loogu soo dhaweeyey Magaalada Burco? | Aftahan News
Madaxweynaha Somaliland iyo Weftigiisa sidee loogu soo dhaweeyey Magaalada Burco?
Burco(aftahannews):- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wefti uu hoggaaminayo oo hawlo shaqo ku maraya qaar ka mid ah gobollada dalka, ayaa maanta gaadhay xarunta gobolka Togdheer ee Burco, waxaana halkaas si aan kala hadh lahayn oo waddaniyad iyo jacayl ka muuqdo ugu soo dhaweeyey guud ahaanba qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Burco oo isku duuban.
MADAXWEYNE BIIXI OO LAGU SOO DHAEWEYEY TOGDHEER 2020
Bulshada ku dhaqan Burco oo aan u kala hadhin soo dhaweynta madaxweynaha, ayaa lulayey caleemo qoyan iyo calanka Jamhuuriyadda Somaliland, waxana wejiyadooda ka muuqday farxad iyo rayn-rayn ay ku qabaan aragtida weftiga madaxweynaha ee soo booqday gobolka Togdheer. waxaana sidaa lagu sheegay qoraalkan oo warbaahinta madaxtooyada naga soo gaadhay.